crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Carruurteenna – Kheyraad u baahan Barbaarin Aasaasi ah. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka April 18, 2017	0 432 Views
Muqdisho (Himilonews) – Deeqaha ugu weyn ee Ilaahay addoomadiisa ku galado waxaa kamid ah ubadka. Ubaxa ifiya aqalka una ah fure reyreynta guryaha waa ilmaha. U nuglaantooda iyo kahor marinta baahida aasaasiga kuu ah tooda waa ramashada Ilaahay ku beeray dubaaqa waalidka.
Previous: La kulan – Gabadha labadeeda gacmood mar kaliya wax ku wada qori karta.
Next: Mark Ching – Ninka halista ugu bareeray samata-bixinta Eeyaha hilibkooda laga ganacsado.